Mkpisi anụ ezi - Goodao Technology Co., Ltd.
Ezubere anụ ehi maka ihe oriri microelements dị nkịta, dị ka calcium, zinc, vitamin na amino acid. Ebe ọ bụ na ngwaahịa a na -agabiga mmiri na -adịghị ala ala yana usoro akọrọ ikuku, ọ nwekwara ike nyere aka na ụmụ nkịta na -ata ikikere ezé. Anyị na -ahọrọ anụ ehi ọhụrụ ka ọ bụrụ akụrụngwa, a na -ahụ ụdị anụ ahụ nke ọma ma nwee njiri mara ụtọ.
Ọnụ ọgụgụ nri (mkpisi/ụbọchị)
Ntị: 1. Mgbe ị na -enye nkịta ma ọ bụ ụmụ nkịta merela agadi ndụmọdụ, ka ị banye n'ime mmiri tupu i jiri ya. 2. Biko zere ịfeụbiga mmanya ókè, jide n'aka na ị ga -enye ezigbo mmiri mmiri mgbe ị na -eri nri ehi ehi.
Protein Crube: 20%min
Ntụ: 4.5% max
Aha ngwaahịa Mkpanaka anụ ezi
Ngwaahịa bụ isi ihe Anụ
N'ịbụ ndị otu IT mepụtara nke ọma na ọpụrụiche na-akwado, anyị nwere ike inye nkwado teknụzụ na ọrụ ịre ahịa tupu ịre ahịa maka N'ogbe OEM/ODM China Pet Beef Chicken Duck Stick Pet Snack Pet Treat for Dog and Cat, Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, cheta jiri ndepụta zuru oke bute ihe ndị ị chọrọ, gụnyere ụdị/ihe na ọnụọgụ ị chọrọ. Anyị ga -ezitere gị ozi kacha mma maka anyị.
N'ogbe OEM/ODM China Pet Snack na Pet Treat price, akụrụngwa anyị kwadebere nke ọma na njikwa mma dị mma n'oge niile nke mmepụta na-enyere anyị aka ikwe nkwa afọ ojuju ndị ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ihe anyị ma ọ bụ chọọ ịtụle usoro omenala, cheta na ị nweere onwe gị ịkpọtụrụ m. Anyị nọ na -atụ anya iso ndị ahịa ọhụrụ gburugburu ụwa mekọrịta mmekọrịta azụmaahịa na -aga nke ọma.
Anyị na -enwe ọ theụ na ezigbo aha n'etiti ndị na -azụ ahịa anyị maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị dị oke mma, ọnụego asọmpi yana ọrụ kacha mma maka ọnụahịa asọmpi China kwụ ọtọ gburugburu Green Skin Teppo Gun Skewer, anyị nwere ike hazie ngwongwo dịka mkpa gị siri dị na anyị ga -emere gị ya n'onwe gị mgbe ị nwetara.
Ọnụ ego asọmpi China Gun Skewer na Bamboo Skewer, kwa afọ, ọtụtụ ndị ahịa anyị ga -eleta ụlọ ọrụ anyị wee nweta ọganiihu azụmaahịa dị ukwuu na -arụ ọrụ na anyị. Anyị ji obi ụtọ na -anabata gị ka ị bịa leta anyị n'oge ọ bụla yana ọnụ anyị ga -emeri nke ọma na ụlọ ọrụ ntutu.
Nke gara aga: Ọkụ Duck Cube
Mkpisi anụ ezi